Dare reElectoral College Rotarisirwa Kudoma VaBiden Zviri paMutemo Munzira Yavo Yekunotoreswa Mhiko Yekutungamira America
Biden Trump combination picture
Nhengo mazana mashanu nemakumi matatu nemasere kana kuti 538 dzedare rinozivikanwa nekuti Electoral College dzakatanga kuvhota nemusi weMuvhuro kuti dzisarudze zviri pamutemo vakasarudzwa kutungamira nyika yeAmerica VaJoe Biden vebato remaDemocrats.
Asi kune mamwe matunhu kunonzi kuri kutyirwa mhirizhonga sezvo vamwe vatsigiri vemutungamiri wenyika VaDonald Trump vasiri kufara vachiti sarudzo dzakabirirwa kunyangwe vari kukundikana kuuya nehumbowo kumatare.
VaTrump vari kungonyorawo padandemutande reTwitter kuti vakakunda kunyangwe ari manyepo. Dare reCongress richatambidzwa zviri pamutemo zvinenge zvabva kuElectoral College musi wa 6 Ndira.
VaBiden avo vari kumba kwavo muguta reWilmington, Delaware vari kutarisirwa kutura mashoko kunyika manheru eMuvhuro ano nezveElectoral College uye kusimba kwehutongo hwejekerere muAmerica.
Nyaya dzezvematongerwo enyika Va Frank Chatonda vari kuSouth Carolina, muAmerica vanoti vari kutarisira kuti VaBiden vachasvitsa mavhoti anodiwa sezvo matunhu achisungirwa kutevera zvakabuda musarudzo dzemusi wa 3 Mbudzi.
Hurukuro naVa Frank Chatonda